Na lasa aza ny Rosianina: tsy maintsy arenina ny Kraoma | NewsMada
Na lasa aza ny Rosianina: tsy maintsy arenina ny Kraoma
Nangoron’entana tamin’ny faramparan’ny taona 2019 teo ireo mpandraharaha rosianina, nitantana ny orinasa Kraomita Malagasy (Kraoma). Sahirana tanteraka ity orinasam-panjakana ity, satria tsy voaloa intsony ny karaman’ny mpiasa, nanomboka ny volana janoary sy ny febroary izao. Bokan-trosa mitentina 101 miliara Ar, ary mahatratra 39 miliara Ar ny fatiantoka navelan’ireo mpitantana malagasy teo aloha sy ny Rosianina.
Manoloana izany, nihaona tamin’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany, Ravokatra Fidiniavo sy ny mpiara-miasa aminy, ny solontenan’ny mpiasa, omaly, teny amin’ny foiben’ny minisitera, eny Ampandrianomby. Niarahana nikaroka ny vahaolana, ka mifantoka amin’ny zavatra telo loha. Voalohany, sahirana ny mpiasa, tsy manan-kohanina, tsy manam-bola sady tratry ny ranobe nandritra ny orambe farany teo.
Mbola misy ny tahiry kraomita
Nilaza ny minisitra fa hisy ny fiaraha-miasa amin’ny sehatra sy ny mpiara-miombon’antoka samihafa, toy ny BNGRC, ohatra, hijerena ny fanampiana azo atao ho an’ireo mpiasa any Brieville Andriamena. Faharoa, karohina ny fomba handoavana ny karaman’ny mpiasa, miisa 507, ka any Brieville ny 455 ary eto Antananarivo ny 52. Fahatelo, tsy maintsy hatao ny hampihodinana indray ny Kraoma. Hisy ny fanadihadiana lalina, satria raha ny filazan’ireo Rosianina, tsy misy intsony ny tahiry kraomita. Mitsipaka izany anefa ny mpiasa. Nambaran’Andrianirina Dina, delegen’ny mpiasa, fa mbola misy ny tahiry azo trandrahina. Tsy fantatra mazava ny fatran’ny tahiry, fa tsy maintsy hatao ny fanadihadiana ara-teknika.
Tsiahivina fa nahatratra 32.000 taonina ny karomita notrandrahina sady naondran’ny Kraoma, ny taona 2018.